मैले गुच्चा खेलेको ठाउ हो यो, यसलाइ एउटा सुन्दर ठाउ बनाउन चाहेको छु - मनोज मेहता - inaruwaonline.com
मैले गुच्चा खेलेको ठाउ हो यो, यसलाइ एउटा सुन्दर ठाउ बनाउन चाहेको छु – मनोज मेहता
- बिरेन्द्र शाह
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ ११, २०७४ समय: ८:२२:१२
११ असार, इनरुवा। यस इनरुवाअनलाईनको स्थानिय निर्वाचनको विशेष संबाद कार्यक्रम अनतर्गत नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको तर्फबाट मेयर पदका उमेदबार मनोज कुमार मेहता संग गरिएको कुराकानी :
मनोज जी तपाइको छोटो परिचय दिनुहोस न?
हालको इनरुवा वडा नं. २ को म मनोज कुमार मेहता, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको तर्फबाट यस इनरुवा नगरपालिकाको मेयर पदमा उमेदबार छु। म श्री लक्षमण प्रसाद मेहताको छोरा हु।
के प्रसंगले तपाइले मेयर पदमा उमेदबारि दिनुभएको हो?
म दुइ चार चोटी बिजनेसको सिलसिलामा आइनैरहन्छु यहा निर, यहा निर आउदा खेरि जहिले पनि एउटै कुरा एउटै कुरा, कहिलै पनि बिकास हेरिन यस ठाउमा अलि अलि बिलडिंगहरु बने तयो पनि बाहिरबाट आएको रेकिटान्सको पैसाले मात्र बनेको हो। तर बाटोघाटो, एगरिक्लचर, एजुकेशन, हेल्थमा कहि पनि डेभलोप देखिन, तेसैले अहिले नै राइट टाइम हो मलाइ म जन्मेको ठाउमा केहि गर्नु पर्छ भनि सोच बनाएर म आको छु।
तपाइले भरखरै यस ठाउमा दुइ चार पल्ट आए भन्नु भो तर तपाइको वर्तमानको बसोबास चाहि काहाको हो?
म युके गको थिए पढ्नलाइ र हालसाल मेरो बिजनेस छ लन्डनमा, त्यहाको ब्यापार मेरा साथिहरुले हेर्दैहुनुहुन्छ। यहा काठमाडौमा पनि म ब्यापार गर्दै आएको छु। होटल तपोवन कोटेश्वरमा सञ्चालन गर्दै आएको छु त्यहाको बिजनेस पनि मैले साथिको जिम्मामा दिएको छु।इनरुवामा पनि निर्माण सम्बन्धि व्यावसाय सञ्चालन गर्दै आएको छु।म एक किसिमले आत्मनिर्भर भै सकेको छु अबका दिनमा मेरो एउटा मात्र सोच छ म जन्मेको ठाउ, म गुच्चा खेलेको ठाउ, मैले टायर गुरकाको ठाउलाइ चाहि एउटा सुन्दर ठाउ बनाउन चाहेको छु।
तपाइ देखिन त युवा देखिनु हुन्छ तर अरु पार्टिबाट निकै अनुभवि व्याक्तिहरुले उमेदबारि देका छन, त्यो अवस्थामा तपाइ के भन्न चाहनुहुन्छ?
म वहाहरुलाइ आदर तथा सम्मान गर्छु म वहाहरुलाइ के भन्न चाहन्छु भने मलाइ एक चोटि मौका दिनुस्। म तपाइहरु कै छोरा, भाइ हो मलाइ मौका दिनुस, तपाइ हरुको जस्तै मलाइ पनि यस ठाउको माया छ यस ठाउको लागि केहि गर्न चाहन्छु।
तपाइ मेयर पदमा बिजय भै सकेपछि के के हुनेछन तपाइका कार्ययोजनाहरु ?
मेरो पहिलो कार्ययोजना भनेको “करप्सन” र “कमिसन” लाइ हटाउनु हो। एजुकेशन र हेल्थ सिस्टमलाइ अझ राम्रो बनाउछु। यस नगरपालिका भित्र पर्ने कुनै पनि बच्चाले शिक्षाबाट बञ्चित हुनु नपरोस। कृषि क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन्छु। नया प्रविधिलाइ भित्राउछु, युवाहरुलाई अवसरको सिर्जना गर्छु। युवाहरुको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ तेतातिर म पहल गर्छु। विकास निर्माणका कार्यहरुलाइ पनि मेरो कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राख्छु।
अन्य पार्टिका उमेदबारहरुलाइ तपाइले निकै ठुलो चुनौति देको सुनिन्छनि?
अब म एउटै लाइनमा भन्छु जसले इनरुवालाइ माया गर्छ तेस्ले मलाइ माया गर्छ।
अन्तयमा तपाइको केहि बाकि कुराहरु छन कि?
यहाको ६५ हजार जनता संग मेरो भाग्य जोडिएको छ भोलि म त्यो ठाउमा पुगे भने म वहाहरुको लागि काम गर्छु।म हात जोडेर नमसकार गर्छु मलाइ जिताएर ठउमा पुर्याइदिनुहोस। म बिकास देखेको छु, म बिकास गर्छु, मलाइ एक चोटि मौका दिनुस।
कर्मचारीको चुनावमा ओली पक्षको प्यानल जित
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुनसरी आवद्ध राष्ट्रसेवक बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको निर्वाचनमा ओली पक्षधर समूहले प्यान...